.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Song လင့်ချိတ်နည်း
Flash Song လင့်ချိတ်နည်း
Flash Song တစ်ပုဒ်ကို လင့်ချိန်မယ်ဆိုရင် ပထမ ဦးဆုံး Ning ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ မန်ဘာဝင်ထားဖို့တော့
လိုပါလိမ့်မယ် ..ဥပမာ MM-Flashsongs ဖူးစာရှင်လေး ..ဘယ် Ning ဆိုဒ်မှာ မဆို လင့်ချိတ်လို့ ရပါတယ်
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ကို သွားလိုက်ပါ ။ ကွန်မန့် ဘောက် တစ်ခုကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်အိမ်မှာလည်း ကွန်မန့်ဘောက်စ်ရှိပါတယ်.. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ လုပ်ပါ..
အောက်ကပုံလေးလို ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. Browse..ကို ထပ် နှိပ်ပါ
ကိုယ်လင့်ချိတ်မယ့် Flash Song တစ်ပုဒ်ကို ရွေးပါ..Open ကို နှိပ်ပါ..
Loading လုပ်နေပါလိမ့်မယ် ခဏလေး စောင့်ပးလိုက်ပါ..
သူငယ်ချင်းများ အားလုံး အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.. ကွန်တော်လည်း နားလည်သလို
ရှင်းပြလိုက်ပါတယ် လင့်ချိတ်နည်းတွေကတော့ အများကြီး ရှိပါတယ် ဒီနည်းလေးက အရမ်းလွယ်လို့
တစ်ဆင့်ချင်း သေချာ ပြပေးထားပါတယ် အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ပါစေ....
Posted by Thurainlin at 17:38
Ko Htun Linn 20 December 2012 at 19:51
(ကိုယ့်အိမ်မှာလည်း ကွန်မန့်ဘောက်စ်ရှိပါတယ်) အဲဒီ Box ကဘယ်ဟာပြောတာပါသလဲခင်ဗျာ။ ပုံထဲကအတိုင်းမတွေ့လို့ပါ။
Ko Htun Linn 20 December 2012 at 20:48
(ကိုယ့်အိမ်မှာလည်း ကွန်မန့်ဘောက်စ်ရှိပါတယ်.) ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာပါလဲခင်ဗျာ။ ပုံထဲကအတိုင်းမတွေ့လို့ပါ။
Ko Htun Linn 22 December 2012 at 19:14